ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ ပို႔ကိုမွ မၾကည့္ပဲ ေက်ာ္သြားရင္ မင္းဘယ္လို ပို႔မ်ဳိးကို ၾကည့္ခ်င္တာလဲ...?
ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့စာကိုမွ မဖတ္ပဲ ေက်ာ္သြားရင္ မင္းဘယ္လိုစာမ်ဳိးကို ဖတ္ခ်င္တာလဲ?
ဖတ္ၾကည့္လို္က္ပါ မင္းဘ၀အတြက္ အေထာက္အကူ ၿပဳႏူိင္ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႕ဘ၀ကိုသူတို႕ မုန္းတယ္ဆိုတဲ့လူေတြ ရွိပါတယ္။ သူတို႕ဟာ သူတို႕မွာရွိေနတဲ့အရာေတြနဲ႕ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါဘူး။
အကယ္၍ သင္လည္း အဲလုိပဲျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ သင္ဟာ- ခ်မ္းသာမွ၊ ေအာင္ျမင္မွ၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြ အမ်ားႀကီးရမွ၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမွ၊ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ မိသားစုရွိမွ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္ဆိုတဲ့ လူေတြထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ အဲလုိဆိုရင္ေတာ့ မွားေနပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ “ ငါ့ဘ၀ကိုငါ မုန္းတယ္ ” လို႕ ေျပာတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ပါဦး။ ဒါဆို ငါေသရင္ ပိုေကာင္းမလား-လို႕။
ဒီစကားက ၾကမ္းတမ္းခ်င္ ၾကမ္းတမ္းလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတြးရုံေလးပဲ ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္အသက္ရွင္ေနသမွ် သင္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘ၀ကို ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးလည္း အၿမဲတမ္း ရွိပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ဘ၀ဟာ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀နဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္သမတ္တည္း မတူႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္ မတတ္ႏုိင္တဲ့ အ၀တ္အစား ၀တ္တဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္မစီးႏုိင္တဲ့ကား စီးတဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္မေနႏုိင္တဲ့အိမ္မ်ိဳးမွာ ေနသူေတြကေတာ့ ကိုယ့္အနားမွာ အၿမဲတမ္း ရွိေနမွာပါပဲ။
ဒါကို က်င့္သားရေအာင္လုပ္ပါ။ ေနသားက်သြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွ ျပႆနာမရွိေတာ့ပါဘူး။ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳကိုသင့္ကိုယ္ပုိင္ေအာင္ျမင္မွဳရရွိဖုိ႕အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္မွာမရွိတဲ့အရာေတြအတြက္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါနဲ႕။
ဘဘာ၀ေလာကႀကီးကို အေသအခ်ာ ၾကည့္ဖူးပါသလား။မိုးေကာင္းကင္ ၊ တိရစၱာန္ေလးေတြ၊ အပင္ေတြနဲ႕ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ။ ဒါေတြဟာ တကယ္ကို လွပပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ဘ၀ကို သူ႕အရွိအတုိင္း ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတတ္ေအာင္ သင္ယူပါ။
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့စာကိုမှ မဖတ်ပဲ ကျော်သွားရင် မင်းဘယ်လိုစာမျိုးကို ဖတ်ချင်တာလဲ?
ဖတ်ကြည့်လို်က်ပါ မင်းဘဝအတွက် အထောက်အကူ ပြုနိူင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘဝကိုသူတို့ မုန်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါဘူး။
အကယ်၍ သင်လည်း အဲလိုပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ- ချမ်းသာမှ၊ အောင်မြင်မှ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ အများကြီးရမှ၊ နာမည်ကျော်ကြားမှ၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုရှိမှ ပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ အဲလိုဆိုရင်တော့ မှားနေပါပြီ။ နောက်တစ်ကြိမ် “ ငါ့ဘဝကိုငါ မုန်းတယ် ” လို့ ပြောတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် မေးကြည့်ပါဦး။ ဒါဆို ငါသေရင် ပိုကောင်းမလား-လို့။
ဒီစကားက ကြမ်းတမ်းချင် ကြမ်းတမ်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တွေးရုံလေးပဲ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ သင်အသက်ရှင်နေသမျှ သင်ဟာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘဝကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်း အမြဲတမ်း ရှိပါတယ်။
ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို တစ်ခုမှ မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်မှာ အဆိုးမြင်အတွေးတွေ ရှိနေဆဲပဲ။ အဲဒီအတွေးတွေကို ထွက်သွားခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်ဘဝရဲ့ ဘယ်အရာတွေကို သင် တကယ်မြတ်နိုးသလဲ?
ဘဝကို သင်မချစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ အဲဒါကို တစ်ချိန်လုံး ပြောနေဖို့မလိုပါဘူး။ သင့်ဘဝကိုသင် မချစ်ဘူးလို့ ပြောလေလေ၊ အဲဒီ အနှုတ်လက္ခဏာအတွေးတွေက ပိုအားကောင်းလာလေလေပါပဲ။
သင့်ရဲ့ဘဝဟာ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့ ဘယ်တော့မှ တစ်သမတ်တည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ် မတတ်နိုင်တဲ့ အဝတ်အစား ဝတ်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မစီးနိုင်တဲ့ကား စီးတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မနေနိုင်တဲ့အိမ်မျိုးမှာ နေသူတွေကတော့ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါပဲ။
ဒါကို ကျင့်သားရအောင်လုပ်ပါ။ နေသားကျသွားပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှ ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူး။ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်မှာမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်တော့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။
၄။ သင်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေကို ပိုလုပ်ပါ
သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေမယ့်အလုပ်တစ်ခုခုကို အနည်းဆုံးတစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ် နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။
၅။ ဘဝဟာ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပါ
သင့်မှာ အလုပ်ကောင်းကောင်း မရလို့၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးက သင်မျှော်မှန်းထားသလေက် အဆင်မပြေလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေဟာ အခြေအနေတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်လို့ လက်ခံပါ။ အရာအားလုံးဟာ ပြောင်းလဲကြပါတယ်။
၆။ အကောင်းမြင်တတ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းပါ
သင် အမြဲပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဂရုစိုက်ပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေ၊ အကောင်းမြင်တတ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင် သင်လည်း ပိုပြီးပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်အပေါင်းအသင်းတွေဟာ အဆိုးမြင်တတ်သူတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအတွေးတွေဟာ သင့်ကိုလည်း လွှမ်းမိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ဂရုပြုပါ။
၈။ TV သိပ်မကြည့်ပါနဲ့
၉။ သေးငယ်တဲ့အရာလေးတွေအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားတတ်လာပါစေ
ဘဘာဝလောကကြီးကို အသေအချာ ကြည့်ဖူးပါသလား။မိုးကောင်းကင် ၊ တိရစ္တာန်လေးတွေ၊ အပင်တွေနဲ့ မြစ်ချောင်းတွေ။ ဒါတွေဟာ တကယ်ကို လှပပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ဘဝကို သူ့အရှိအတိုင်း ချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင် သင်ယူပါ။
၁၀။ ဘဝရဲ့သာယာပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေကို ရယူူပါ
အခု သင့်မှာ အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်- ဘဝရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ရှာဖွေပါ၊ ပျော်ရွှင်ပါ၊ ပြီးတော့ ဘဝကို ချစ်မြတ်နိုးပါ။